भेनेजुएलामा अमेरिका असफल हुनेछ - क. लोकनारायण सुवेदी
हामी समाजवादी विचारधारा अंगाल्नेहरुले युद्धलाई होइन, शान्तिलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ । भेनेजुएलामा साम्राज्यवादी अमेरिकाले जुन हस्तक्षेप गरेको छ, संकट खडा गर्न खोजेको छ, मलाई लाग्छ उसले सक्दैन ।
मलाई सम्झना छ जतिबेला अमेरिकाले भियतनाममाथि बमवर्षा गरिरहेको थियो, त्यसबेला सारा दुनियाँमा ‘भियतनाम भियतनाम, तिम्रो नाम मेरो नाम, भियतनाम भियतनाम’ भन्ने जागरण चलेको थियो । त्यसबेला अमेरिकाका तत्कालिन उप-राष्ट्रपति स्पाइरल जे.एफ.एम. नेपाल आएको बेला हामीले पनि कालो झण्डा देखाएर विरोध गरेका थियौँ । यो नेपालको परम्परागत चलन हो कि साम्राज्यवादको विरुद्धमा लड्नु । हाम्रा पुर्खाहरुले ब्रिटिश साम्राज्यवादका विरुद्ध लडेका थिए । हामी अमेरिकी साम्रााज्यवादको विरुद्धमा लडिरहेका छौँ ।
नेपाललाई अमेरिकाले आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ, त्यसकारण नेपाल सरकार, नेपाली जनता र प्रचण्डले समेत अमेरिकाको विरुद्धमा विज्ञप्ति जारी गर्नु गलत हो भन्ने एकाथरीको मत छ, यो कुरा पछिल्लो समयमा मिडियामा पनि आइरहेको छ । तर यो गलत कुरा हो । साम्राज्यवादका विरुद्ध हामी किन लड्ने भन्ने कुराको एउटा कारण छ । साम्राज्यवादले युद्धको पक्षपोषण गर्छ । हामीले चाहे इराक, अफ्रिकालाई हेरौँ, चाहे मध्यपूर्वलाई हेरौँ । अहिले भेनेजुएलामाथि आँखा लगाइरहेको छ । यो उनीहरुको चरित्र हो ।
क. लोकनारायण सुवेदी
हामी समाजवादी विचारधारा अंगाल्नेहरुले युद्धलाई होइन, शान्तिलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ । भेनेजुएलामा साम्राज्यवादी अमेरिकाले जुन हस्तक्षेप गरेको छ, संकट खडा गर्न खोजेको छ, मलाई लाग्छ उसले सक्दैन । यसमा अमेरिका असफल हुनेछ । भेनेजुएलाको सर्वोच्च अदालतले विपक्षी नेता गुएँदोलाई विदेश जान र बैंकबाट पैसा निकाल्न रोक लगाइदिएको छ । अहिलेको निर्वाचित सरकार र त्यसका राष्ट्रपति मादुरोकै पक्षमा त्यहाँको सेना, सर्वोच्च अदालत, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय र बहुसंख्यक जनताको सर्मथन छ । त्यहाँका जनताले अमेरिकी हस्तक्षेपको विरुद्धमा जुन आवाज उठाइरहेका छन् । त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ । त्यहाँका जनताको त्यो आवाजलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ र हाम्रो पार्टीले त्यसलाई समर्थन गर्दछ ।
हाम्रो निम्ति पनि यो सबै गर्न जरुरी छ । हामी जसरी बेलाबेला सताइने गरेका छौँ । बाह्य हस्तक्षेपबाट हामी बेलाबेलामा समस्यामा पर्ने गरेका छौँ । हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ । नेपाललाई क्रिडास्थल बनाएर चीनलाई घेर्नेसम्मका कुराहरु बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । नेपाल सरकार यसबारेमा गम्भिर हुनु पर्दछ । अमेरिकाले नेपाललाई बोलाएर उताको प्रतिनिधिले अरु केही नभन्ने, नेपालको केन्द्रीय भूमिकालाई अगाडि बढाउन खोजेका छौँ भनेर जुन कुरा उसले गरेको छ, त्यो एकदमै खतरनाक कुरा हो ।
यो केवल भेनेजुएला र मादुरोको कुरा मात्र होइन । विश्व साम्राज्यवादको दादागिरीको कुरा हो । विश्वभरी नै ऊ अतिक्रमण बढाउन चाहन्छ, हस्तक्षेप बढाउन चाहन्छ, उसले जहाँसुकै आफ्नो हैकम फैलाउन चाहन्छ । यसलाई हामीले साथ दिनु हुँदैन ।
तपाईं हामीलाई थाहा छ, नेपालका धेरै कृषि फर्महरुमा अमेरिकाले लगानी गरेको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यस्ता धेरै कृषि फर्महरू छन् जहाँ अमेरिकाको प्रत्यक्ष लगानी छ । पहिले यो लगानी सोभियत संघले गर्न खोजेको थियो तर उसले गर्नु अगावै अमेरिकाले यहाँ लगानी गरेको छ । नेपाललाई क्रिडास्थल बनाउने तयारीका साथ यो सबै भइरहेको छ । हामी यसमा सचेत हुनु पर्दछ ।
एसिया प्यासिफिक सम्मेलन जो केही महिना अगाडि नेपालमा सम्पन्न भएको छ, किन उनीहरुले नेपाललाई नै रोजे त ? यसमा पनि खतरनाक कुरा छ । चीनलाई घेराऊ गर्ने तयारी यहाँ पनि छ ।
साम्राज्यवाद विरोधी मञ्चले जुन काम गरिरहेको छ यो निकै सह्रानीय छ । यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र हामीले भेनेजुएली जनताको पक्षमा उभिनुपर्छ । त्यहाँको राज्यको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताका लागि हामी खडा हुनुपर्छ । यो न्यायपूर्ण कुरा हो । हामीले अमेरिकाको केवल विरोधका लागि मात्र विरोध गरेको होइन, नेपालको सार्वजनिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, र सार्वभौमसत्ताका निम्ति हामी एकजुट हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि हामी एक ठाँउ उभिनु पर्छ । किनभने, हाम्रो देश पनि अतिक्रमणमा छ, हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता पनि खतरामा छ ।
यो कुराले केवल भेनेजुएली जनताका लागि मात्र होइन, विश्वभरका न्यायप्रेमी जनताको पनि यो सरोकारको विषय हो । हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको स्वार्थको कुरा पनि यो हो र नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको कुरा पनि हो यो । आन्तरिक राष्ट्रवाद शोषित पीडित जनतालाई विभाजन नगर्ने कुरा हो । उनीहरुलाई सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरुद्ध प्रयोग गर्ने कुरा हो । आन्तरिक राष्ट्रवाद भनेको केवल जाति-जाति बिचको समस्याको कुरा मात्र होइन, यो एकता र समानताको कुरा पनि हो । आन्तरिक एकतालाई सही ढंगले बुझ्यौँ भने मात्र हामीले सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरोध गर्न सक्छौं । नेपाललाई सही दिशामा अगाडि बढाउन सक्छौँ ।
नेपाली जनताको तर्फबाट र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्धमा भेनेजुएली जनताको संघर्षमा हाम्रो पूर्ण ऐक्यबद्धता छ ।
(२०७५ माघ १७ गते काठमाडौँमा साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा, नेपालद्वारा आयोजित भेनेजुएलासँग ऐक्यबद्धता कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष क. लोकनारायण सुवेदीले राख्नुभएको मन्तव्यको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ – सम्पादक ।)
पछिल्लाे - ठूलो प्रजातन्त्र
अघिल्लाे - शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना विपरित अघि बढे देश द्वन्द्वमा फँस्न सक्छ – अध्यक्ष प्रचण्ड